> Resource > Video > VirtualDub u Mac: Si fudud Edit Video ku Mac
VirtualDub waa video qabashada iyo processing software ah oo lacag la'aan ah oo awood u madal Windows. Kale badan ay awoodaan si ay u gaadho aasaasiga ah hawlaha video tafatir sida cadaadi, jar, ka saar audio, waxaad sidoo kale dalban kartaa saamaynta gaar ah sida ku daray subtitles iyo in ka badan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad wareejiyo madal Mac ah, waxaad u baahan kartaa kale VirtualDub ah Mac, maxaa yeelay VirtualDub kaliya taageeraa OS Windows natively.
Sida la xiriira ee VirtualDub u Mac kale ugu fiican, Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) waa doorashada ugu saxsan. Software Arintan waxay u sahlaysaa in aad xaalkaa wax ku dhowaad file video, audio ama sawir, iyadoo la isticmaalayo dhammaan qalab caadi video tafatirka. Ka sokow, sidoo kale si fudud aad retouch kartaa video la saamaynta sida cut boodi, usii-wareeg iyo wax ka badan. Hadda aynu eegno dhow ah qaababka ugu waaweyn waxa ay si sahlan loo isticmaalo weli awood leh Mac video editor.
Bal aan hubiyo tutorial video koowaad!
Si fudud soo dhoofsadaan ku dhawaad ​​kasta video files
Tan kale VirtualDub u Mac taageertaa dhammaan qaabab video ay ka mid yihiin MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, ASF, MOV, F4V, M4V, Mpg, TS iyo in ka badan. Taas macnaheedu aadan haysan inay wax 'pre-diinta kaliya hoos u worries- wax kasta oo aad leedahay si aad u bilowdo ka qaban!
Interface dareen leh oo user-friendly
Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) sidoo kale waxay bixisaa meesha lagu fiican abaabulan oggolaanaya video, qoraalka iyo Yeeelid audio. Feature jiitaa-n-dhibic ayaa awood u aad si fudud u helaan wax kasta, si aadan u baahan inaad geliyaan aad files warbaahinta ka fayl ay ku jiraan. Suuqa kala eegis ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa in interface ugu weyn si aad u awoodo in uu arko saameynta-waqtiga dhabta ah oo aan ku furo ciyaaryahan waxa ay u tahay.
Hawlaha tafatirka Xoog video
Ma doonaysaa in ay soo gooyay qeybo ka mid aan loo baahnayn oo ah video ah? Hayso baararka madow aad video hareeraha? Ha welwelin. Just dajiyaan aad video in VirtualDub this u Mac oo aad u kaamil ah. Waxaad qabsato kartaa video isticmaalaya ka duwan, fursadaha nuur iyo Saturation la hal-click. Diyaariyeen ah ee saamaynta video sida shaandhada video, kala guurka, Intro / credits, wareeg ah usii, humaag, ka horimaanaya, bood gooyaa oo dheeraad ah oo sidoo kale la siiyaa si aad u xoojin karto video goobtii.
Marka habka tafatirka la soo gabagabeeyo, inaad isla markiiba badbaadin karo ama wadaagi abuurka. Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) waxay bixisaa habab kala duwan oo wax soo saarka, ay ka mid yihiin Deji video ah qaab gaar ah file in ay la jaan qaada wax ku dhowaad telefoonada gacanta jecel yahay ama qalabka la qaadi karo; koombiyuutarka si toos ah ama qaybsiga gal YouTube ama Facebook ama gubasho DVD ah.
Hadda download VirtualDub this u Mac si fudud xaalkaa aad videos ee Mac!